Fannaanada Rihanna Oo Ciyaartoyga Kaepernick Kula Biirtay Dagaalka Donald Trump Iyo Takoorka Madowga – Cadalool.com
Fannaanada caanka ah ee Rihanna ayaa iska diiday inay ka qayb-gasho ciyaarta finalka tartanka NFL-ka ee loo yaqaano Super Bowl, iyadoo taageero siinaysa ciyaartoyga Colin Kaepernick oo laba sannadood ka hor u istaagay inuu u doodo dadka madow ee ciidamada ammaanka Maraykanku ay ku dilaan gudaha dalkaas.
Kaepernick oo ay da’diisu tahay 30 jir ayaa Maraykanka ka bilaabay olole caan noqday oo ahaa in uu jilibka dhulka la dhigo marka la shido heesta calanka ee dalkaas ka hor inta aanay bilaabmin ciyaartu, waxaana taas kaga dayday dad badan oo ciyaartooyo iyo shaqsiyaad caan ah, hase yeeshee waxa uu dhalleecayn ba’an kala kulmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku cadaadiyey naadiyada dalkaas in aanay u cusboonaysiinin heshiiska, taas oo keentay inuu waayo koox uu u ciyaaro.
Sida uu qoray wargeyska US Weekly, fannaanada Rihanna ayaa gaashaanka ku dhufatay martiqaad loo keenay si ay uga heesto ciyaarta finalka NFL-ka oo dhici doonta bisha labaad ee sannadka dambe oo ku beegan February 3, 2019, loona qorsheeyey in lagu qabto magaalada Atlanta ee Georgia.
Qareenka Rihanna ayaa wargeyska u xaqiijiyey in marti-qaadka loo keenay ay ka cudurdaaratay, sababtuna tahay in ay ku biirtay mudaharaadka uu hormoodka u yahay Kaepernick oo ay kaga cabanayaan in boolisku si xun ula dhaqmo dadka madow ee dalkaas iyo inay mararka qaarkood iska dilaan.
Kaepernick ayaa dhawaan dacwad ka gudbiyey kooxaha 30-ka ah ee NFL-ka oo uu ku eedeeyey inay diideen inay heshiis usoo bandhigaan sabab la xidhiidha cunsurinino, laakiin waxa uu garab weyn ka helay shirkadda NIKE oo siisay xayaysiiska sannadka oo muuqaalkiisa kusoo baxaya, halkaas oo uu lacag badan ka helayo.